Pejy fandokoana maimaim-poana mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena
Fanatanjahantena pejy fandokoana pejy tokana
Ankizy maro amin'ny taona akanin-jaza sy ambaratonga voalohany no tia karazana fanatanjahan-tena ary manandrana fanatanjahan-tena samy hafa rehefa mivoatra. Ireo mpamorona sary dia niniana nampiditra fanatanjahan-tena toy ny soccer, ballet na tennis amin'ny safidy efa fantatra, ary koa ny fanatanjahan-tena toy ny baseball, antsitrika na ady totohondry, izay tsy atolotra hatraiza hatraiza.
Amin'izany fomba izany dia afaka mahita kilalao isan-karazany amin'ny zanany ny ray aman-dreny. Ary angamba ho hitanao ny faniriana hanandrana azy ireo. Ny tsindry iray amin'ilay rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ireo maodely fandokoana ho an'ny fanatanjahantena tsirairay avy
Milalao golf / golf
Ny tsindry iray amin'ilay rohy dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny sary fandokoana fanatanjahantena aseho:
Mihazakazaka eny amoron-dranomasina
Fiakarana / tendrombohitra
Mahitsy ny trano
Baseball - boky fandokoana fanatanjahantena